यी हुन् अनुहारको चाउरीपन हटाउनका साथै चमक ल्याउने तरिका
१० माघ २०७६, काठमाडौं बढ्दो उमेरसँगै मानिसको अनुहारमा चाउरीपन देखा पर्न थाल्छ। कहिले–काहीँ सानो उमेरमा पनि अनुहारमा चाउरीपन आउने गर्दछ। फलफुल खाएर पनि अनुहारको चाउरीपनलाई कम गर्न सकिन्छ। सुन्तलामा धेरै
यसकारण पटक–पटक पिसाब पोल्ने र चुहिने हुन्छ
०९ माघ २०७६, काठमाडौं पिसाब चुहिने समस्या जन्मजातै पनि हुन सक्छ। बच्चाहरूमा पिसाबको नली पिसाबथैलोमा जोडिएको हुनुपर्नेमा पिसाब रोक्ने मेकानिजमभन्दा बाहिर जोडिँदा पिसाब चुहिने हुन्छ। बच्चादेखि नै पिसाब चुहिरहेको छ
गर्भवती महिलाले थाइराइडको औषधी सेवन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
०९ माघ २०७६, काठमाडौं गर्भावस्थामा कहिले–काहीँ थाइराइडको समस्या देखिने सम्भावना हुन्छ। यो अवस्थामा गर्भवती महिलाले आफूले–आफूलाई निकै कियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, यो अवस्थामा औषधी खाना मिल्छ कि मिल्दैन? जान्नुहोस्….. गर्भवस्थामा
०८ माघ २०७६, काठमाडौं महिनावारीको क्रममा महिलामा विभिन्न शारिरिक र मानसिक परिवर्तन आउने गर्दछन्। यसै क्रममा महिलाले आफ्नो पुरुष पार्टनरसँग सहयोग र सहानुभूतीको आशा गर्दछन्। र आशा अनुरुप नतिजा पाए
०८ माघ २०७६, काठमाडौं अधिकांश मानिसहरुलाई भुटेको मकै मन पर्छ। खाजाका रूपमा खाइने भुटेको मकैले मानव स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै फाईदा पुर्याउँछ। यसमा फाइबरको मात्रा अधिक हुन्छ। जसकारण पाचन प्रणालीमा सुधार
अध्ययन भन्छः स्लिम केटीहरुको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा बढी खुशी
०७ माघ २०७६, काठमाडौैं विवाह एक सास्वत सत्य हो। विवाहको फल खाने पनि पछुताउँछ नखाने त झन नपछुताउने कुरै भएन भनेर कहानी नै बन्ने गर्दछ। यो बीचमा विवाहलाई लिएर अनेक
नाङ्गो फोटो फेसबुकमा राखिदिने धम्की दिँदै पटक–पटक बलात्कार
०७ माघ २०७६, काठमाडौं मोरङमा युवतीलाई धम्की दिँदै बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–७ का २५ वर्षीय रविन आचार्य रहेका छन्। सामाजिक संजालमा फोटो
युवतीलाई पटक-पटक बलात्कार गर्ने युवक प्रहरी नियन्त्रणमा
०७ माघ २०७६, काठमाडौं २१ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। स्थायी घर गोरखा नगरपालिका–६ भई काठमाडौंको ललितपुर महानगरपालिका–१३ बस्दै आएका ध्रुव बाबु जोशीलाई सोमबार
छात्राले होस्टेलभित्रै जन्माइन् मृत शिशु
०७ माघ २०७६, काठमाडौं पछिल्लो समय टिनएज प्रेगनेन्सी वा किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती बन्ने घटना संसारभर विकराल बन्दै गईरहेको छ। किशोरावस्थामा नै गर्भवती भनेपछि भ्रूण हत्या गर्ने वा गर्भपतन गराउने
प्रियंकाको ब्याचलर पार्टीमा मधहोश पार्ने तस्बिरहरु (फोटो फिचर)
०७ माघ २०७६, काठमाडौं अहिले इन्स्टाग्रामको ‘हट इस्यू’ भनेको प्रियंका कार्कीको ‘ब्याचलोरेट पार्टी’ हो जुन अझै धुमधामका साथ अघि बढिरहेको छ । प्रियंका पाँचदिन अघि आफ्ना ६ जना साथी बोकेर
प्रेस रिभ्यू : सभामुखमा अग्नीको उम्मेदवारी – भैँसेपाटीको समीकरणले ओली गलेको सङ्केत
माघ ६ गते सोमबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सभामुखको उम्मेदवार टुङ्गो लागेको विषयका समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयको आइतबारको बैठकले पार्टी